Jobho 32 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
32 Naizvozvo varume vatatu ava vakarega kupindura Jobho, nokuti akanga achizviti akarurama.+ 2 Asi Erihu mwanakomana waBharakeri muBhuzi+ wemhuri yaRamu akatsamwa kwazvo. Akatsamwira Jobho kwazvo nokuti iye akanga ati mweya wake wakarurama pane kuti Mwari ndiye akarurama.+ 3 Akatsamwirawo shamwari dzake nhatu kwazvo nokuti dzakanga dzisina kuwana mhinduro asi dzakataura kuti Mwari akaipa.+ 4 Zvino Erihu akanga amirira kutaura naJobho, nokuti vakanga vari vakuru kwaari pamazuva.+ 5 Erihu akazoona kuti mumiromo+ yevarume vatatu vacho makanga musina mhinduro, akaramba achitsamwa kwazvo. 6 Erihu mwanakomana waBharakeri muBhuzi akapindura, akati: “Ndiri muduku pamazuvaAsi imi muri vakuru.+Ndokusaka ndakazvidzora, ndikatya Kukuudzai zvandinoziva. 7 Ndakati, ‘Vane mazuva ngavataure,Uye vane makore mazhinji ndivo vanofanira kuita kuti uchenjeri huzivikanwe.’+ 8 Chokwadi simba roupenyu riri muvanhuwo zvavoNemhepo yokufema yoWemasimbaose ndizvo zvinovapa kunzwisisa.+ 9 Vaya vane mazuva mazhinji havasi ivo vakachenjera,+Uye vaya vakakwegura havasi ivo vanonzwisisa kutonga.+ 10 Naizvozvo ndati, ‘Chinditeerera.Ini, iyeni ndichataurawo zvandinoziva.’ 11 Tarirai! Ndanga ndakamirira mashoko enyu,Ndanga ndichingoteerera mafungiro enyu,+Imi muchitsvaka mashoko okutaura. 12 Ndanga ndichingokuteererai,Asi tarirai hapana ari kutsiura Jobho,Hapana kana mumwe chete wenyu ari kupindura zvaari kutaura, 13 Saka musazoti, ‘Tawana uchenjeri;Mwari ndiye angamutsiura, kwete munhu.’+ 14 Zvaasina kutaura mashoko kwandiri,Naizvozvo handizomupinduri nemashoko enyu. 15 Vavhundutswa, havana kupindurazve;Mashoko avatiza. 16 Ini ndamirira, nokuti havasi kuramba vachitaura;Nokuti vamira, havasisiri kupindura. 17 Ini, iyeni ndichapindura;Ini, iyeni ndichataurawo zvandinoziva; 18 Nokuti ndazara nemashoko;Mudzimu uri kundimanikidza+ mudumbu mangu. 19 Tarirai! Dumbu rangu rakaita sewaini isina pokubuda napo;Riri kuda kuparuka sezvinoita hombodo itsva.+ 20 Regai nditaure kuti zvindirerukire.Ndichashama miromo yangu kuti ndipindure.+ 21 Ndapota, ngandirege hangu kusarura munhu;+Handizotumidzi munhu wepanyika zita rokuremekedza+ ndichimubata kumeso; 22 Nokuti handizivi nzira yandingatumidza nayo zita rokuremekedza ndichibata kumeso; Muiti+ wangu angandibvisa zviri nyore nyore.